Biyo bax xilli hore ah iyo mid raaga - iftineducation.com ≡Navigasi Menu
→ Biyo bax xilli hore ah iyo mid raaga
iftineducation.com - Biyo bax xilli hore ah ugu horeyn waa aragti shakhsiyadeed oo ah in qofku aanu maamuli karin biyo bixiisa ilaa heerka la doonayo. In la haysto aragti biyo bax xilli hore ah way ku dhici kartaa dadka oo dhan oo mararka qaarkood wax adag ayay ku ahaan kartaa ninka gaar ahaantiisa, lamaanaha ninka ama labadaba. Arrintan waxanu u aragnaa in biyo baxa xilli hore ahi badanaaba ay salka ku hasyo cilmi-nafsi.
Qaab kale oo loo daweyn karo biyo baxa xilli hore waa isticmaalka dawo. 2009 waxa la soo saaray dawo taas oo si fudud loo qaadanayo hal kiniin ka hor intaan la samayn galmo. Sida ay sheegayaan soo-sarayaashu waxa ay tani dheeraynaysaa wakhtiga ka hor intaan biyo baxu iman. Ugu dambeynti waxa jira kiriimyo leh alaabooyin suuxdineed kuwaas oo lagu subki karo dhalfada si loo yareeyo dareemada. Rabadhada galmada qaarkood way ku jiraan kiriimada noocaas ahi laakiin qofka ayaa gaar u iibsan kara kiriimadaas. Kuwani waxa si sahlan looga helayaa internetka ama dukaamada alaabta galmada.